ဒီနှစျဆောငျးရာသီအတှကျ အငျ်ဂလိပျ အီဒီယမျ ၈ ခု - Wall Street English...
Home | ဘလော့ခ် | ဒီနှစျဆောငျးရာသီအတှကျ အငျ်ဂလိပျ အီဒီယမျ ၈ ခု
ဒီနှစျဆောငျးရာသီအတှကျ အငျ်ဂလိပျ အီဒီယမျ ၈ ခု
Nov 20, 2017 &VerticalLine;
ဆောငျးရာသီဟာ အခုဆို လထေုထဲမှာ ခံစားသိရှိနိုငျတဲ့အဆငျ့ရောကျလာပါပွီ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတောျတို့ရဲ့ အငျ်ဂလိပျစာ လေ့လာရေးခရီးစဉျကို ဒီရာသီနဲ ့ဆကျနှယျနတေဲ့ အသုံးဝငျတဲ့ အငျ်ဂလိပျ အီဒီယမျတခြို့နဲ ့ဆကျနှယျပွီး လေ့လာလိုကျကွပါစို့။ အခုလိုမြိုး ဆောငျးရာသီဆနျတဲ့ စကားပွောဆိုမှုတှထေဲမှာ သငျ့အနနေဲ ့အခှံမာသီးတှေ၊ သစျရှကျ၊ ပနျးသီးနဲ ့မိုးရာသီတို့အပွငျ ရှဉျ့လေးတှပေါပေါငျးထညျ့ဖို ့မြှောျလငျ့နိုငျပါပွီ။
၁။ Autumn years
တစုံတယောကျရဲ ့ဘဝနောကျဆုံးနှစျမြားကို ရညျညှှနျးတာ ဖွစျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ သူတို ့အလုပျ မလုပျတော့ဘဲ အနားယူလိုကျတဲ့နောကျပိုငျးအခြိနျကာလကို ရညျညှှနျးတာပါ။
- Alex plans to travel around the world to enjoy his autumn years. (အဲလကျစျဟာ သူ ့ရဲ ့နောကျဆုံးနှစျတှကေို ခံစားဖို့ကမ်ဘာတစျဝနျး ခရီးထှကျလညျပတျဖို ့စီစဉျထားတယျ။)
- During the autumn years, the couple spent most of their time living in the peaceful countryside of Scotland. (သူတို ့စုံတှဲဟာ အလုပျနားပွီးနောကျပိုငျး ငွိမျးခမြျးတဲ့ စကော့တလနျကြေးလကျအရပျမှာ အခြိနျအမြားစုကို ကုနျဆုံးခဲ့ကွပါတယျ။)
၂။ Turn overanew leaf
ပိုကောငျးသညျ့ နညျးဖွငျ့ ပွုမူဆောငျရှကျရနျ တစုံတဦး၏ ဘဝကို ပွောငျးလဲခွငျး
- The actor obviously turned overanew leaf and now he doesn’t smoke anymore. (ဒီသရုပျဆောငျဟာ သိသိသာသာကိုပဲ သူ့ဘဝကို ပွောငျးလဲပစျလိုကျပါပွီ။ အခုဆိုသူဟာ နောကျထပျဆေး လိပျမသောကျတော့ပါ။)
- It’s time you should turn overanew leaf. You are already 30. (သငျ့အနနေဲ့အပွောငျးလဲတစျခုခုလုပျဖို့ အခြိနျကနြပွေီ။ အသကျ သုံးဆယျပွညျ့နပွေီလေ။)
၃။ Lost in the mists of time
အလှနျကာလကွာမွငျ့ခဲ့ပွီဖွစျသော တစျစုံတစျခု ဖွစျပကြျခဲ့ခွငျးကို ပွသရာတှငျ သုံးသညျ။ ရှငျးလငျးစှာ ပွနျမှတျမိရနျ ခကျခဲသော အရာတစျခုကို ရညျညှှနျးသုံးစှဲသညျ။
- Their memory of that beautiful autumn had been lost in the mists of time. (အဲ့ဒီလှပတဲ့ဆောငျးရာသီနဲ ့ပတျသကျတဲ့ သူတို့ရဲ့ အမှတျတရကတော့ အခြိနျနှငျ့အမြှ တဖွညျးဖွညျးပြောကျဆုံးသှားခဲ့ပါပွီ။)
- Once the capital ofapowerful kingdom, the city’s glory is now lost in the mists of time. (တခါက အငျအားကွီးတဲ့ ဘုရငျ့နပွေညျတောျကွီးရဲ့ မွို့တောျ အခုတော့ သူ့ရဲ ့ဂုဏျကကြျသရဟော အခြိနျနဲ့အတူ ပြောကျဆုံးခဲ့ရပါပွီ။)
၄။ Squirrel something away
အနာဂတျတစျခြိနျတှငျ သုံးနိုငျရနျအတှကျ အထူးသဖွငျ့ ငှကွေေးစသညျ့ တစုံတခုကို သိုလှောငျသိမျး ဆညျးထားခွငျး၊ ဖှကျထားခွငျး။
- Annie finally manages to squirrel her salary away foraluxury trip to Santorini. (အနျနီဟာ နောကျဆုံးတော့ ဆနျတိုရီနီကို သှားလညျမယျ့ ဇိမျခံခရီးစဉျအတှကျ သူမရဲ ့လစာတှကေို စုဆောငျးနိုငျခဲ့ပွီ။)
- The family squirreled away all kinds of canned food, clothes and even weapons to prepare for the doomsday. (ကမ်ဘာပကြျမယျ့နေ့အတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျတဲ့အနနေဲ့ဒီမိသားစုက စညျသှတျအစားအစာတှေ၊ အဝတျအစားတှအေမြိုးစုံကို သိုလှောငျသိမျးဆညျးထားခဲ့တယျ။)
၅။ Save forarainy day
မမြှောျလငျ့ဘဲ လိုအပျလာသညျ့ တစျခြိနျအတှကျ တစုံတခု (သို ့မဟုတျ) ငှကွေေးကို စုဆောငျးထားခွငျး
- Kid, you shouldn’t spend all your money like that. Try to save it forarainy day. (ကလေးရေ ကိုယျ့ပိုကျဆံတှကေို ဒီလိုမြိုး မသုံးသငျ့ဘူးနောျ။ တစျနေ့အရေးပေါျလိုအပျမဲ့အခြိနျအတှကျ သုံးဖို့ စုနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။)
- We never know what may happen tomorrow, so it isagood idea to save money forarainy day. (မနကျဖွနျ ဘာဖွစျမလဲဆိုတာ ကြှနျတောျတို ့လညျး မသိနိုငျဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ငှကေို အသုံးလိုလာမဲ့နေ့အတှကျ ကွိုစုထားတာဟာ အကွံကောငျးတစျခုပါ။)
၆။ Apple of someone’s eye
အခွားအရာမြားထကျ သငျပိုမွတျနိုးသညျ့ တစျစုံတစျယောကျ (သို ့မဟုတျ) တစျစုံတစျခု။
- John has3children but the youngest daughter is clearly the apple of his eye. (ဂြှနျ ့မှာ ကလေးသုံးယောကျရှိပမေဲ့ အငယျဆုံံးသမီးကတော့ သူ့အခစြျဆုံးဆိုတာ ရှငျးနတောပါပဲ။)
- Why does she still go away even though she knows she is the apple of my eye? (သူမကို ကြှနျတောျမွတျနိုးတာ သိနလေကြျနဲ ့ဘာ့ကွောငျ့ သူ အဝေးကိုထှကျပွေးနရေတာလဲ။)
၇။ Be nuts about something or someone
လူပုဂ်ဂိုလျတစျဦး / လှုပျရှားမှုတစျခု / အရာဝတ်ထုတစျခုနှငျ့ပတျသကျ၍ အလှနျအမငျး စိတျပါဝငျစားမှုရှိခွငျး။
- Sophie is nuts about visiting the Shwe Dagon Pagoda in Myanmar. (ဆိုဖီဟာ မွနျမာပွညျက ရှှတေိဂုံဘုရားကို သှားရောကျဖူးမြှောျရတာနဲ ့ပတျသကျလို ့အရမျးစိတျဝငျစားနတေယျ။)
- My wife is nuts about kids, so we are going to adoptachild next year. (ကြှနျတော့ျဇနီးက ကလေးတှနေဲ ့ပတျသကျလို ့အရူးအမူးဖွစျနတေယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နောကျနှစျဆိုရငျ ကြှနျတောျတို့ကလေးတစျယောကျ မှေးစားတော့မယျ။)
၈။ Be / Feel under the weather
- I feel under the weather today. I think I’m gettingacold. (ဒီနေ့ ကြှနျတောျ နလေို့မကောငျးဘူး ကြှနျတောျတော့ အအေးမိပွီ ထငျတာပဲ။)
- The team leader left early this morning because she was under the weather. (အဖှဲ ့ခေါငျးဆောငျက နမေကောငျးလို့ ဒီမနကျပဲ အစောကွီးပွနျသှားတယျ။)